DEG-DEG: Al-Shabaab Oo La Wareegtay Deggaanka Af-Urur Ee Puntland - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » DEG-DEG: Al-Shabaab Oo La Wareegtay Deggaanka Af-Urur Ee Puntland
DEG-DEG: Al-Shabaab Oo La Wareegtay Deggaanka Af-Urur Ee Puntland
Boqollaal Askari oo aad u hubeysan, kana tirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa aroornimadii hore ee saaka waxay galeen deggaanka Af-Urur ee gobolka Bari, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland.
Sida ay war-fidiyeenka u sheegeen dadka deggaanku, ciidamada Al-Shabaab ayaa dagaal la’aan kula wareegay deggaanka Af-urur, kadib markii gelinkii dambe ee shalay ciidamada maamulka Puntland ay isaga carareen Af-urur, iyagoo ka war-helay in ciidamada Al-Shabaab ay kaabiga kusoo hayaan.
Ilo-wareedyo xagga Milatariga ah oo war-fidiyeenka qaar soo xiganayaan ayaa sheegaya in Ciidamada Xarakada Al-Shabaab qeybo ka mid ah ay galeen saldhigga ay faarujiyeen Ciidamada Puntland halka kuwa kale ay isku baahiyeen deggaanka si loo xaqiijiyo ammaanka.
Ciidamada Puntland ee ka baxay saldhigga Af-Urur ayaa warar kala duwan ka soo baxayaan halka ay u jiheysteen iyadoona la tilmaamayo dhanka deggaanka Carmo inay u baxeen.
Saraakiil iyo Ducaad ka tirsan Xarakada Al-Shabaab oo hogaaminaya ciidanka la wareegay Af-Urur ayaa sida lagu warramayo kulamo iyo fadhiyo la leh waxgaradka iyo Duqowda deeggaanka Af-Urur.
Saraakiisha Al-Shabaab ayaa lagu wadaa siday wararku tibaaxayaan in saacadaha soo socoda ay meel fagaare ah kala hadlaan guud ahaan bulshada deggaanka.